Ibsa ejjennoo Miseensota ABO Konyaa Viktooriyaa, Awusteraaliyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa ejjennoo Miseensota ABO Konyaa Viktooriyaa, Awusteraaliyaa
Injifannoon Wareegama ilamman Oromoon argame, Gantoota Seenaatiin hin sharafamu.
Bitootessa 14, 2021
Nuti miseensonni ABO Konyaa Viktooriyaa, Awusteraaliyaa, gaafa 14/03/2021 walgahii hatattamaa gaggeeffachuun haala adeemsa siyaasaa ABO fi murna maqaa hoogganaa qabatee dhaaba keessaa fincilee bahuun yeroo ammaa “KS ABO gaggeessinna” jechaa jiran irratti marii bal’aa goonee jirra.
Marii keenya keessattis, ABOn jaarmayaa uummata Oromoo kan haqaa fi bilisummaaf waggoota dheeraaf falmaatti jiru, falmaa walirraa hin cinne keessattis wareegama ulfaataa baasuun kaayyoo dhaabichaa tikfatee yoonaan gahe ta’uu walhubachiifne.
Har’a yeroo itti qabsoon ABOn gaggeessu uummata isaan hammatamee handhuura biyyattii keessa jiru mitii, kaleessa yeroo hoogganoonni isaa biyyoota ollaa keessaa qabsoo biyya keessaa gaggeessaa turan, shiroota keessaa fi alaatiif dhaabichi kan hin jilbeeffanne ta’uus walyaadachiifne. Kunis kan ta’ee kaayyoo ABOf amanamaa ta’uun haleellaa keessaa fi alaan aggaammatame mara fashaleessuun akka danda’ame seenaan ABO ragaa dha. Dhaabni keenyas didhaalee isa mudachaa turan mara Heeraa fi Seera qabuun furachaa fi irra aanaa as ga’eera.
Ammas akkuma kaleessaa shirri keessaa fi alaa dhaaba keenya waliin akka jiru ifatti mul’ataa jira. Bu’aa qabsoo dhaabni keenya galmeessaa as ga’e kana dabarsanii diinaaf kennuu fi boodatti deebisuuf murnoon maqaa “Hooggana dhaabaa” jedhuun diinatti hirkitanii jeequmsa babal’isaa turan, waajjira ABO muummee Finfinneetti argamu humna tikaa fi poolisaan cabsanii seenuun, darbees isaanumaan eegamaa “Kora Saba ABO gaggeeffanna” jedhanii as bahan. Kun hedduu saalfachiisaa fi qaanessaa ta’uu hubanna.
Gartuun kun PPtti (Biltsiginnaa ofiin jedhutti) manxanaanii qaama tikaa mootummaa fi poolisaan tikfamaa jaarmayaa qaroo ijaa uummata Oromoo ta’e, ABO diiguufi dantaa uumata Oromoo diinaaf dabarsanii kennuutti jiru.
ABO dadhabsiisuu fi diiguufis dirqama jaarmayaa PP (Bilxiginnaa Paartii) irraa fudhatanii injifannoo Oromoon dhiigaa fi lafee goototaa itti wareegee goonfate harcaasuuf shira hojjatamaa jiru ta’uus akka gaariitti hubatamuu qaba. Kun ammoo bifa fedheen fudhatama hin qabu.
Marii keenya keessatti, murni diiggaa kun hookkara hooggana keessaatti uumuu, sirna dhablummaa dhaaba keessatti babl’isuu, adeemsa qabsoo Oromoo gufachiisuufi shira tokkummaa Oromoo laaffisu gaggeessaa jiraachuu waan hubanneef, dura dhaabbachuuf murteeffanne.
Hubannoo kana irratti hundaa’uun miseesnsonni ABO Konyaa Viktooriyaa, Awustraaliyaa, hojiilee murna diiggaa fi farreen qabsoo Oromoo ta’an ummataaf saaxiluun murteessaa ta’uu waliigaluun ibsa ejjannoo armaan gadii baafannee jirra.
1. ABOn Kora Sabaa geggeeffachuuf waggaa darbe Gumii Sabaan murteessee, koree itti hundeessee hojjachaa akka jiru beekamaadha. Haata’uutii, murni seeraa fi sirna dhaabaa cabsee Kora Sabaa maqaa dhaabaatiin gaggeessuuf yaale, seera dhaabaa kan cabsee fi sirna dhablummaa kan afeeru ta’uu hubannee jirra; sababa kanaan teessoon murna fincile kanaan godhame kamiyyuu fudhatama hin qabu; duras ni dhaabbanna.
2. Boordiin Filannoo Biyyoolessaa afaanfaajjii murni diiggaaf adeemu uume hiikuuf Korri waloo akka gaggeeffamu murti kennee ture. Haa ta’u malee, ejjennoon isaan amma fudhatan kun murticha faallessudha. Itti dabalees, Boordiin Filannoo Biyyoolessaa murti ofii dabarse faallessee Kora isaan seeraa ala waammatan irratti argamuun seerri kabajamaa akka hin jirre kan mirkaneessedha jenna. Mootummichis murna seeraan ala deemaa jiru jajjabeessaa jiraachuu argina. Akkasuu ta’ee, mootummaa ol-aantummaa paartii tokkoo leellisu kana irraa waan eegamu waan hin jirreef injifannoo kaleessa goonfanne eeggachaa; Oromoon mirga isaa eeggachuufi qabsoo isaa bifa isaa maluun akka itti fufu waamicha goona; dirqama dacha kanas fudhannee ciminaan irratti hojjanna.
3. Adeemsa murna maqaa Hooggana dhaabaan faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo deemu kana saaxiluun, ABOn yeroo adda addaa qaamota dhimmi ilaallatuuf ibsa kennaa fi beeksisaa turus deebii ga’aa hin arganne. Tattaaffii dhaabni keenya gochaa ture dinqisiifachaa mootummichi qabsoo karaa nagaa irratti walii galame cabsuu isaa hawaasti keenyaa fi qaamni idil-addunyaa akka hubatuu fi deeggersa qabsoo bilisummaa akka finiinsu gaafachaa, nuti miseensonni ABO konyaa Viktooriyaa dirqama keenya bahuuf kutannoon ni qabsoofna.
4. ABOn seera ittiin Kora sabaa gaggeeffatu ni qaba. KS HDn ABO, miseensonni Gumii saba wayyabnii fi miseensonni hin beeknes fudhatama hin qabu. Kora Sabaa murni kun gaggeeffadhe jedhu kun ammoo hojii diiggaa, adeemsa farreen qabsoo Oromoo fi dabballoota ”Paartii Biltsiginnaan” (PPn) raawwate waan ta’eef, ni balaaleffanna; duras ni dhaabbanna.
5. Dirree siyaasaa dhiphisanii ABOn fedhii qabsoo karaa nagaa akka hin feenetti olola dabballootni “Biltsiginnaa“ gageessan tumsuun ABO irratti shira murni fincile kun dalagu marti hojii dabaa waan ta’eef korri isaan gaggeeffatan fedhii miseensotaa, deeggertootaa fi hawaasa Oromoo kan hin hammatnee fi fedhii diinota qabsoo Oromoo bakkaan ga’uuf hojii diinummaa dalagamaa jiru waan ta’eef karaa maraan dura ni dhaabbanna.
6. Murni kun hookkara dhaaba keessatti uumamee fakkeessanii ololaa oofu. Haa ta’u malee murni kun namoota qubaan lakkaawaman maxxantummaa “Biltsiginnaa” fi mootummaa qabatanii fiixa-ba’insa qabsoo Oromootti gufuu ta’uuf warra deeman ta’uu uummanni keenyaa fi lammiileen Oromiyaa hubatee furmaanni kanaa qaama mirga isaaf falmu, mootummaa ofii dhaabbachuu ta’uu hubatee, deeggertoonnii fi firoottan qabsoo Bilisummaa Oromoo hanga Oromiyaan bilisummaa ishee gonfattutti ABO duukaa akka waliin dhaabbatan jenna; waamichas keenyas dhiyeessina.
Miseensota ABO Konyaa Viktooriyaa
14 Bitootessa 2021